JICA မှ ဂျပန်ယန်း ၁၅ ဘီလီယံခန့် ချေးယူရန် လွှတ်တော် သဘောတူ၊ SME လုပ်ငန်းများ ချေးငွေရရှိရေး စံသတ်?? - Yangon Media Group
ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) မှ ဂျပန်ယန်း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံ (မြန်မာကျပ်ဘီလီယံ ၂၈ဝ) ချေးယူရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က သဘောတူအတည် ပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါချေးငွေကို SME လုပ်ငန်းများအား ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်အဆင့်(၁)စီမံကိန်းထက် ယခုအဆင့်(၂)စီမံကိန်းတွင် ချေးငွေရရှိရေး စံသတ်မှတ်ချက်များကို လျှော့ပေါ့ပေးမည်ဟု စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင် မောင်ဝင်းက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှပေးပို့သော ဂျိုက်ကာမှ ဂျပန်ယန်း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံချေးယူရန်ကိစ္စ အပေါ် ၎င်းက ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျိုက်ကာချေးငွေဖြင့် ယခင်အဆင့်(၁)စီမံကိန်းအဖြစ် အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေး (SME) လုပ်ငန်းများကိုထုတ်ချေးခဲ့ပြီး အခုအဆင့် (၂) ချေးမည့်အစီအစဉ်တွင် ချေးငွေအတိုးနှုန်းအား လျှော့ချပေးစေလိုခြင်း၊ ချေးငွေသက်တမ်းအား တိုးမြှင့် ပေးစေလိုခြင်း၊ ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် သက်မှတ်သည့်စံချိန်စံညွှန်းများ ဖြေလျော့ပေးစေလို ခြင်း၊ အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နေသည့် SME လုပ်ငန်းရှင်များရရှိ ရေးတို့ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လွှတ်တော်အတွင်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းအပေါ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက”စံသတ်မှတ်ချက်များကို လျှော့ပေါ့ ပေးရေးမှာ စံသတ်မှတ်ချက်များကို အဆင့်(၁)မှာထက်အဆင့်(၂)မှာ ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မယ့်ကိစ္စများကို ဂျိုက်ကာနဲ့ညှိနှိုင်းသွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စီမံကိန်းအဆင့်(၁)တွင် မူလက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့် SME လုပ်ငန်းများကိုသာ ထုတ်ချေးမည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြေ လျှော့ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များရှိပါကလည်း ချေးငွေကို ရရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက် ပေးထား”ဟု ပြောသည်။ ဗဟိုဘဏ်မှအပ်ငွေအပေါ် အတိုးနှုန်းမှာ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ် ပြီး ငွေကြေးမူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မည်သည့်ချေးငွေကိုမျှ အပ်ငွေအတိုးနှုန်းထက် လျှော့၍ ထုတ်ချေးခြင်းမရသဖြင့် အတိုးနှုန်းကို ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင် နှုန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
” SME လုပ်ငန်းများမှာများစွာရှိသဖြင့် ချေးငွေကိုလုပ်ငန်းတိုင်း မထုတ်ချေးနိုင်ဘဲ အာမခံပစ္စည်းရှိသူနှင့် မရှိသူ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိသူနှင့်မရှိသူ၊ အခွန်ဆောင်သူနှင့်မဆောင်သူ၊ Finance Statement ရှိသူနှင့် မရှိသူအကြားရှိနေသည့်အတွက်ရှိသူများက ပိုမိုအခွင့်အလမ်းရရှိမည်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးက ရှင်းသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူချင်း အတူတူအာမခံပစ္စည်းပေးနိုင်သူ ကရရှိမှာဖြစ်ပြီး မပေးနိုင်သူများ အတွက်မူ CGI စနစ်(အပေါင်း ပစ္စည်းမလိုသည့်ချေးငွေအာမခံ)ကို စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကာ SME လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းရန် ဒုတိယဝန်ကြီးက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျိုက်ကာမှချေးငွေရယူမည့် ကိစ္စကိုလွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူများသဖြင့် သဘောတူအတည် ပြုကြောင်း လွှတ်တော်နာယကမှ ကြေညာခဲ့သဖြင့် ဂျိုက်ကာ၏ ODA ချေးငွေဂျပန်ယန်း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလီယံထပ်ဆင့်ချေး ငွေပုံစံဖြင့် SME လုပ်ငန်းရှင်များ ထံအတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေး တော့မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအတည်ပြုစီမံကိန်းမှာ အဆင့်(၂)ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းအဆင့် (၁)အတွက် ဂျပန်ယန်း ၅ ဒသမ ဝ၃၃ ဘီလီယံကို ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကရယူခဲ့ကာ SME လုပ်ငန်းရှင် ၂၉၂ ဦးကို ထုတ်ချေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂိုးသမား ဒီဂီယာ၏ အစွမ်းအစကို သံသယဖြစ်ခဲ့မိကြောင်း ဖာဒီနန် ဝန်ခံ
ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီကို ဖျက်သိမ်းပြီး ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းရန် နှစ်ဖ??